यो वर्ष कै ठूलो सूर्य ग्रहण आइतबार, नासाले लाइभ टेलिकास्ट गर्ने
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ०३, २०७४ समय: १७:१०:०८
३ भाद्र, काठमाडाैं । आइतबार यो वर्षकै ठूलो सूर्य ग्रहण लाग्ने भएको छ । दुर्इ हप्ता अघि चन्द्रग्रहण लागेको थियो । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार, चन्द्र र सूर्य ग्रहण खगोलिय घटना भएपनि यिनीहरुको असर मानिसको जीवनमा समेत पर्ने गर्दछ । तर ग्रहण नदेखिने स्थानमा भने यसको असर नपर्ने खगोलविदहरु बताउँछन् ।
यसपटक भदौ ४ का दिन सूर्यग्रहण लाग्ने छ । नेपाली समय अनुसार, यो ग्रहण राती ९ बजेर ३० मिनटमा शुरु भएर दुई बजेर ४९ मिनेटमा समाप्त हुनेछ । नेपालमा भने यो बेला रात पर्ने भएकोले यहाँबाट सूर्य ग्रहण देखिने छैन । यो ग्रहणलाई वर्ष २०१७ को सबैभन्दा ठूलो ग्रहणका रुपमा लिइएको छ ।
१. सुरक्षाको ख्याल राख्नुहोस् : सूर्य ग्रहणको तस्विर खिच्ने क्रममा क्यामरामा सोलार फिल्टर अवश्य राख्न्होला । साथै तस्विर खिच्ने बेलामा आफ्नो आँखालाई अल्ट्राभायलेट किरणबाट जोगाउन चश्मा लगाउनुहोस् । जब चन्द्रमाले सूर्यलाई पुरै ढाकेपछि क्यामराबाट सोलार लेन्स हटाउनुहोस् ताकी तपाईंले सूर्यको बाहिरी आवरण देख्न सक्नुहुन्छ । साथै तस्विर लिँदा ट्राईप्याड पनि साथमा राख्नुहोस् ताकी फोटो खिच्दा क्यामरा हल्लेर तस्विर ब्लर हुन नपाओस् ।
२. कुनै पनि क्यामराले तस्विर खिच्न सक्नुहुन्छ : सूर्य ग्रहणको तस्विर तपाईंहरुले कुनै पनि क्यामराले खिच्न सक्नुहुन्छ । तपाईं आफ्नो मोबाइल या कुनै पनि डिएसएआिर क्यामराले तस्विर खिच्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंको क्यामरामो जूम लेन्स छैन भने पनि ल्याण्डस्केप सट्सबाट तस्विर खिच्नुहोस् । यसरी तपाईंले सूर्य ग्रहणको निकै राम्रो तस्विर खिच्न सफल हुनुहुनेछ ।
३. आकाशको साथसाथै वरपरको तस्विर पनि खिच्नुहोस् : तपाईं केवल सूर्य ग्रहणको मात्र तस्विर नखिच्नु होला । सूर्य ग्रहण हुँदा खगोलमा खिच्न लायक धेरै कुराहरु हुन्छन् । जस्तै यदि तपाईंले सूर्य ग्रहणको बेलामा एउटा रुखको तस्विर खिचे पनि त्यसले सूर्य ग्रहणको समयलाई निकै राम्ररी बयान गर्छ ।
४. यो उपाय अप्नाउनुहोस् : सूर्य ग्रहणको समयमा सूर्यको किरण कम हुन्छ । यस्तो समयमा तपाईं तस्विर एक्सपोजरलाई एडजस्ट गनर्सहोस् । DSLR क्यामराले तस्विर खिच्ने क्रममा अपर्चर f/8 देखि f/16 बनाउनुहोस् । सटर स्पिड 1/1000 देखि 1/4 सेकेन्ड बनाउनुहोस् । यस्तो गर्नाले सूर्य ग्रहणको तस्विर राम्रो आउँछ ।
५. फोटोग्राफीको अनुभव सटासट गर्नुहोस् : सूर्य ग्रहणको तस्विर आफ्ना साथीहरु देखाउनुहोस् र आफ्नो अनुभव सटासाट गर्नुहोस् । तपाईंको तस्विर हेरर मानिसहरुले तपाईंको सूर्य ग्रहणको तस्विरले कति सूर्य ग्रहणको बयान गरेको छ बताउँछन् र अर्को सूर्य ग्रहणको तस्विर लिने क्रममा तपाईंले आफुलाई सुधार्न सक्नुहुन्छ । न्यूज २४ बाट